၁၄:၄၂၊ ၁၆ မတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၈၅၁၁ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ လ
၁၄:၁၉၊ ၁၆ မတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၄:၄၂၊ ၁၆ မတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
[[File:Myanmar Director u kyaw Soe.jpg | thumb | 220x124px | right]]
'''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်''' (၂၈ ဧပြီ ၁၉၂၄ – ၁၉၉၂) သည် မြန်မာအမျိုးသား ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ဘိတ်ကလာတဲ့ငံပြာရည်၏ အမည်ရင်းမှာ ဦးစိုးမောင် (ခ) ဦးကျော်စိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် [[တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး]]၊ [[မြိတ်မြို့]]၌ ဦးရွှေကြာနှင့် ဒေါ်ထူးမေတို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အကြီးဆုံး သားဖြစ်ကာ ၁ဝ တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ဘဲ အမြတ်ခွန်အရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တာဝန်အရ အခွန်ကြီးကြပ်ရာမှ ရုပ်ရှင်လောကသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပဲရော့ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာပဲရော့ ဖေကြိုင်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သည်။ ဦးဖေကြိုင်ထံမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ပညာများသင်ယူခဲ့သည်။ ဦးကျော်စိုးသည် ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝါသနာဆန္ဒပြင်းပြသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းဘဝမှ နုတ်ထွက်၍ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ 'ပြည်တော်အေး' ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်အဖြစ် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်ခံယူကာ ''မေတ္တာပေါင်းကူး'' ဇာတ်ကားကို မင်းသား ထွန်းဝေ၊ မင်းသမီး ခင်ယုမေတို့နှင့် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဆက်၍ကာတွန်းအောင်ရှိန်၏ ''စံရှား-ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်ကောင် ဇာတ်လမ်းများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့လေရာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ''မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့'' နှင့် ''အောင်ပင်လယ်'' ဇာတ်ကားများကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ''ကဲမယုံချင်နေ'' ဇာတ်ကားကိုလည်းကောင်း ရိုက်ကူး ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒါရိုက်တာ 'ကျော်စံကေး' အမည်မှ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ကို ပြောင်းလဲခံယူကာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်တော်အေး ရုပ်ရှင်မှပင် ''အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ''ပြည်တော်အေး'' ရုပ်ရှင်အမည်မှ ''ကျော်စိုး'' ရုပ်ရှင်အမည်သို့ ပြောင်း၍ ဒါရိုက်တာ ''ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်'' အမည်ဖြင့်ပင် ''စံရှား -ဒိန်းဒေါင်'' ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော ''ပင့်ကူနီ'' ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူး ရုံတင် ပြသခဲ့သည်။ ထိုမှဆက်၍ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည် အမည်ကိုတောက်လျှောက်အသုံးပြုလေသည်။
! ဇာတ်ကား !! သရုပ်ဆောင် !!ရုံတင်ခုနှစ်
|မေတ္တာပေါင်းကူး || [[ထွန်းဝေ]]၊ [[ခင်ယုမေ]] || ၁၉၆၀
|''မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့'' ||သန်းနွဲ့၊ မြင့်ဖေ၊ သန်းသန်းဆင့် ||၁၉၆၄
|''အောင်ပင်လယ်'' ||သန်းနွဲ့၊ သာဆန်း၊ သန်းသန်းဆင့် || ၁၉၆၄
|''ကဲမယုံချင်နေ'' ||သန်းနွဲ့၊ မြင့်ဖေ၊ သန်းသန်းဆင့် || ၁၉၆၅
|''အံ့ဩကုန်နိုင်ဘွယ်'' ||သန်းနွဲ့၊ [[ဂျော်လီဆွေ]]၊ အေးအေးသင်း ||၁၉၆၆
|''မဘုတ်ဆုံ'' ||[[တွံတေးသိန်းတန်]]၊ သူဇာ ||၁၉၆၈
|''ပင့်ကူနီ'' ||သန်းနွဲ့၊ မြင့်ဖေ၊ သီတာ || ၁၉၆၈
|''မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်'' ||ဌေးဝင်း၊ [[ဖိုးပါကြီး]]၊ မြင့်ဖေ၊ သီတာ || ၁၉၆၉
| ''မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်'' ||တွံတေးသိန်းတန်၊ [[စံရှားတင်]]၊ စန်းစန်းဝင်း || ၁၉၇၀
| ''ခလေးရဲ့ဖေဖေ လူပျိုတွေ'' ||တွံတေးသိန်းတန်၊ သန်းဖေလေး၊ မြင့်ဖေ၊ တင်တင်နွဲ့ || ၁၉၇၁
|''ဟိုကောင်မလေးညိုတိုတို'' ||[[ကျော်ဟိန်း]]၊ [[စန္ဒာ (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)|စန္ဒာ]] || ၁၉၇၁
| ''အထိမခံရွှေပန်းကန်'' ||တွံတေးသိန်းတန်၊ စန္ဒာ || ၁၉၇၂
|''ကညာပျိုနဲ့ဇရာအို'' ||[[ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း]]၊ ကျော်ဟိန်း၊ စံရှားတင်၊ ခင်သန်းနု || ၁၉၇၂
|''ကြောင်ရေးတဲ့ဖူးစာ'' ||[[ဇော်ဝမ်း]]၊ တင်တင်ညို || ၁၉၇၃
|''ဘဝကြေးမုံ'' ||ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ [[ဇော်လင်း (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)|ဇော်လင်း]]၊ ထွန်းထွန်းဝင်း၊ [[မြင့်⁠မြင့်​ခင် (ရုပ်ရှင်သရုပ်​ဆောင်)|မြင့်မြင့်ခင်]]၊ [[နွဲ့နွဲ့မူ]]၊ ခင်သန်းနွယ် || ၁၉၇၆
|''ဘဲအုပ်ကတစ်ရာနှစ်ရာ'' ||ဇော်လင်း၊ [[ချိုပြုံး]] || ၁၉၇၆
|''ဆောင်ချင်ဦးဟဲ့မင်္ဂလာ'' ||ဇော်လင်း၊ နွဲ့နွဲ့မူ || ၁၉၇၇
|''ကျွန်းသေတ္တာကြီး ချာချာလည်'' ||တိုးညွန့်၊ မြင့်မြင့်ခိုင် || ၁၉၇၈
|''နောင်ဂျိန်လင်မယား'' ||[[ညွန့်ဝင်း]]၊ ချိုပြုံး || ၁၉၇၉
|''ကျွန်တော့အချစ်ဈေးမဆစ်နဲ့'' ||ညွန့်ဝင်း၊ [[ခင်သန်းနု]] || ၁၉၈၃
|''ဟုတ်ကဲ့မမ'' ||ညွန့်ဝင်း၊ ခင်သန်းနု || ၁၉၈၆
|''နော်ကိုကိုနော်'' ||[[ကျော်သူ]]၊ ခင်သီတာထွန်း၊ [[မေဆွိ]] || ၁၉၈၇
| ''အသည်းပေါက်အောင်ချစ်တယ်'' ||[[နေအောင်]]၊ [[မို့မို့မြင့်အောင်]]၊ [[သုမောင်]]၊ [[ထွန်းထွန်းနိုင် (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)|ထွန်းထွန်းနိုင်]] || ၁၉၉၀
| ''ဒါလည်းခွင့်လွှတ်တယ်'' ||ကျော်သူ၊ မေဆွိ၊ မေတ္တာ၊ ကွမ်းသီး || ၁၉၉၁
| ''ခုနှစ်ဖော်မောင်နှံ'' ||နေအောင်၊ မို့မို့မြင့်အောင် || ၁၉၉၃
တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကား ရုံတင်ခဲ့သည်ကိုပင် ကြည့်မသွားလိုက်ရရှာ။ ဒေါ်အေးအေးညွန့်နှင့် ဆရာကြီး ဖူးစာဆုံခဲ့ပြီး သားသမီးခုနစ်ယောက် ထွန်း ကားခဲ့သည်။ သူ၏ သားသမီး မြေးများကလည်း ဘမျိုး ဘိုးတူ၊ ဆရာကြီး၏ တန်ဖိုးကြီးမားလှသော အနုပညာအမွေကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသည်။ သမီးဖြစ်သူ သက်ကျော်စိုး က ဒါရိုက်တာသမီး ငံပြာရည်အဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သားဖြစ်သူ သီဟကျော်စိုးနှင့် ဆရာကြီး၏ မြေးဖြစ်သူ ပြည်ဟိန်းသီဟ၊ တို့ကလည်း အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေ သော ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများအဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ အခြား မျိုးဆက်များဖြစ်ကြ သော . ဒါရိုက်တာ အောင်လင်းနိုင်၊ဒါရိုက်တာရဲခန့် ၊ဒါရိုက်ဝာာ ချိုဝတ်ရည် တို့သည်လဲ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို နယ်ပယ်အသီးသီး တွင် Music Video ဖန်တီးမှုများ ၊ Entertainment Program များ ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတီးဖြတ်မှုများ အသီးသီးပြုလုပ်လျက်ရှိကြ ပြီး ကို အောင်လင်းနိုင်သည် Media9 Entertainment အားဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
- မေတ္တာပေါင်းကူး (ထွန်းေ၀ . ခင်ယုမေ)
- မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ (သန်းနွဲ့ . မြင့်ဖေ . သန်းသန်းဆင့်)
- အောင်ပင်လယ် (သန်းနွဲ့ . သာဆန်း . သန်းသန်းဆင့်)
- ကဲမယုံချင်နေ (သန်းနွဲ့ . မြင့်ဖေ. သန်းသန်းဆင့်)
- အံ့ဩကုန်နိုင်ဘွယ် (သန်းနွဲ့ . ဂျော်လီဆွေ . အေးအေးသင်း)
- မဘုတ်ဆုံ (တွံတေးသိန်းတန် . သူဇာ)
- ပင့်ကူနီ (သန်းနွဲ့ . မြင့်ဖေ . သီတာ)
- မယုံရင် ပုံပြင်မှတ် (ဌေးဝင်း . ဖိုးပါကြီး . မြင့်ဖေ . သီတာ)
- မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင် (တွံတေးသိန်းတန် . စံရှားတင် . စန်းစန်းဝင်း)
- ခလေးရဲ့ဖေဖေ လူပျိုတွေ (တွံတေးသိန်းတန် . သန်းဖေလေး . မြင့်ဖေ . တင်တင်နွဲ့)
- ဟိုကောင်မလေးညိုတိုတို (ကျော်ဟိန်း . စန္ဒာ)
- အထိမခံရွှေပန်းကန် (တွံတေးသိန်းတန် . စန္ဒာ)
- ကညာပျိုနဲ့ဇရာအို (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း . ကျော်ဟိန်း . စံရှားတင် . ခင်သန်းနု)
- ကြောင်ရေးတဲ့ဖူးစာ (ဇော်ဝမ်း . တင်တင်ညို)
- ဘဝကြေးမုံ (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း . ဇော်လင်း . ထွန်းထွန်းဝင်း . မြင့်မြင့်ခင် . နွဲ့နွဲ့မူ . ခင်သန်းနွယ်)
- ဘဲအုပ်ကတစ်ရာနှစ်ရာ (ဇော်လင်း . ချိုပြုံး)
- ဆောင်ချင်ဦးဟဲ့မင်္ဂလာ (ဇော်လင်း . နွဲ့နွဲ့မူ)
- ကျွန်းသေတ္တာကြီး ချာချာလည် (တိုးညွန့် . မြင့်မြင့်ခိုင်)
- နောင်ဂျိန်လင်မယား (ညွန့်ဝင်း . ချိုပြုံး)
- ကျွန်တော့အချစ်ဈေးမစစ်နဲ့ (ညွန့်ဝင်း . ခင်သန်းနု)
- ဟုတ်ကဲ့မမ (ညွန့်ဝင်း . ခင်သန်းနု)
- နော်ကိုကိုနော် (ကျော်သူ . ခင်သီတာထွန်း . မေဆွိ)
- အသည်းပေါက်အောင်ချစ်တယ် (နေအောင် . မို့မို့မြင့်အောင် . သုမောင် . ထွန်းထွန်းနိုင်)
- ဒါလည်းခွင့်လွှတ်တယ် (ကျော်သူ . မေဆွိ . မေတ္တာ . ကွမ်းသီး)
- ခုနှစ်ဖော်မောင်နှံ (နေအောင် . မို့မို့မြင့်အောင်)
သားသမီး၇ယောက်ထွန်းကားပြီး သားဖြစ်သူ [[သီဟကျော်စိုး]]မှာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် ယနေ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အခြားမျိုးဆက်များလည်း ရုပ်ရှင်လောကတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၂၃-ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ ပါရမီရိပ်သာ နှင်းဆီလမ်းနေအိမ်တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်၍ နောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင် '''ခုနှစ်ဖော်မောင်နှံ'''ဇာတ်ကားရုံတင်ရန် နှစ်ပတ်အလိုတွင် ဖြစ်သည်။
[[Category:မြန်မာ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာများ]]
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/506835" မှ ရယူရန်